Taliyihii guutada 5-aad ee Sh/hoose Gen. Maxamed Ibraahim Faarax oo maanta lagu dilay meel u dhaw Marka. – Radio Daljir
Oktoobar 28, 2012 3:15 g 0
Marka Oct 28 – Taliyihiin guutada 5-aad ee ciidamada dawladda federaalka ee gobolka Sh/hoose Gen. Maxamed Ibraahim? Faarax oo maanta oo (Axad ah) lagu dilay deegaan Ceel-mariigaw oo u dhaw magaalada Marka ee xarunta gobolkaas.
Dilka sarkaalkaan sare ee dawladda federaalka ayaa yimid kaddib markii koox hubaysani ay jid-gooyo u dhigeen meesha lagu magacaabo Ceel-mariigaw oo ka tirsan magalada Marka, waxaana uu ku sii jeeday deegaanka Carbiska oo saldhigga ciidankiisu ku yaallay.
Guddoomiyaha gobolks Sh/hoose, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, aya Radio Daljir u sheegay falkaasi in uu dhacay marqanimadii? maanta, ayna fuliyeen wax uu ku dilmaamay cadawga ummadda, kuwaasi oo uu ula jeedo Al-shabaab iyo taageerayaashooda gobolkaas ka dirira.
Guddoomiyuhu, waxaa sidoo kale uu xusay in ay jiraan, ciidamo ka tirsanaa askarta dawladda oo fallaagoobay, kuna biiray weerarada iyo dadaallada dawladda looga soo horjeedo.
Taliyaha la dilay, ayaa muddo ku hawlannaa tallaabooyin lagu xasilinayey ammaanka gobolka Sh/hoose, isagoo hawlgallo badan ka sameeyey deegaanno kala duwan oo isla gobolka ah.